I-Lil Red Cabin:Khipha amapulagi emhlabeni azikho EZINYE IZIMALI - I-Airbnb
I-Lil Red Cabin:Khipha amapulagi emhlabeni azikho EZINYE IZIMALI
Invermere, British Columbia, i-Canada
Indlu encane ibungazwe ngu-Ellen
U-Ellen Ungumbungazi ovelele
Beka amafoni namadivayisi kude. Cabanga nje ngemva kosuku lokuhlola i-res & cultural meca, uqedele usuku lwakho olufakwe izingubo zokugqoka eziluhlaza w/iwayini, ukukhanya okuthokomele- nokuphuma, konke kuyimfihlo ephelele. Unendlu yakho eyakhiwe ngamapulangwe encane yangasese ene-hottub yangaphandle, umgodi womlilo wokukhempa nendlu eyakhiwe esihlahleni. Jabulela isitoreji sebhayisikili nokushushuluza eqhweni, indawo yokubasa umlilo esendlini, indlu yokugezela, indawo yokuwasha izingubo nekhishi eligcwele. Izinyathelo ezikude nomzila wokungcebeleka osetshenziswa kaningi, ibhishi echibini eligudla ibhishi unyaka wonke kusuka ekubhukuda ehlobo kuya ku-Winter Whiteway!
Uma usuthole okhiye bakho, uzoba wedwa. Le ndawo ikhethekile. Ikhaya elincane lokuphumula okungokoqobo nakho konke ozokudinga ukuze uhlale kamnandi kakhulu. Yisikhathi sokunqamula nokusula ingqondo yakho, umzimba, umoya nomphefumulo. Azikho izimali ezengeziwe, izintela kuphela. Ayikho imali yokuhlanza eyengeziwe, azikho izimali zokubungaza, azikho izindleko zokupaka, azikho izimali ezengeziwe zezinto ezifana nezinkuni, ukushisa/i-firestarter ngokwesibonelo. Konke kufakiwe enanini lobusuku!
4.95 · 153 okushiwo abanye
Ubumfihlo nokuthula kuyichaza kahle le ndawo. Kubalulekile ukuba izivakashi zethu zazi ukuthi umsindo uphethe ama-hottub jets nemililo yokukhempa & umculo & sinakekela kakhulu injabulo & inhlalakahle yomakhelwane bethu. Singumakhelwane ongaqondakali futhi sithanda ukuyenza ithule. Uma uhlala endlini eyakhiwe ngamapulangwe ebomvu, uba yingxenye yendawo yangakithi. Isendaweni engaphandle kwedolobha, kodwa ngemizuzu engu-5 uma uhamba ngemoto ukuya edolobheni lase-Invermere, konke kuseduze, kodwa kukude kakhulu. Sisekuqaleni komzila wokungcebeleka osetshenziswa kaningi ohanjwa ngezinyawo usuka e-Invermere uya e-Fairmont. I-hottub yangaphandle & ishawa iyamangalisa futhi inombono ogcwele we-Purcell Mountains konke ngenkathi izungezwe izihlahla nemvelo.
Umbungazi wakho uyatholakala ngomyalezo we-Airbnb noma ngomakhalekhukhwini; utholakala ngemva kokubhukha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Invermere namaphethelo